The OnePlus 9 Pro na-egosi na ezigbo foto tupu ya amalite | Gam akporosis
Enweela ọtụtụ asịrị banyere atụmatụ na nkọwapụta teknụzụ nke onye na-esote OnePlus 9. Ọtụtụ n'ime ọgbaghara ndị anyị natara gbasara ekwentị ndị a gụnyere nke kacha mma na nke kachasị elu, kedu ka ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ. Otú ọ dị, ụfọdụ akụkọ na-emegiderịta onwe ha, na-eme ka ọtụtụ kọọ akụkọ. Ma ọ bara uru iburu n'uche na ọ nweghị ọkwa ọkwa banyere igwegharị a, yabụ ihe niile nwere ike ịdị irè ma ọ bụ na ọ bụghị.
N'otu aka ahụ, ọ bụ ezie na anyị enweghị ike iji ihe ọ bụla gwurie egwu n'oge a, nke ọhụrụ ahụ agbaala ugbu a OnePlus 9 Pro na-agba anyị ume ime otú ahụ, ebe ọ bụ na ụfọdụ ezigbo foto ndị e chere na usoro dị elu apụtawo na-egosi ọtụtụ njirimara ya, ọdịdị ya na eziokwu na-atọ ụtọ gbasara mkpakọrịta nke ndị nrụpụta ekwentị rụzuru na Hasselblad maka mmejuputa usoro foto nke usoro mobile.
Nke a bụ ọdịdị dị na ya nke OnePlus 9 Pro
Onye na-agbapụta mmiri nke anyị na-enye oge a maka ihe oyiyi e si na vidiyo na-esote bụ youtuber Dave Lee, onye, ​​dị ka ya si kwuo, kesara foto na onye ọrụ Discord.
Anyị enweghị ike ịtụ anya ntakịrị n'aka OnePlus 9 Pro. Ngwaọrụ a, dabere na ihe ọnụ mmiri na-anọchi na vidiyo ahụ, ọ ga-abata a curved ihuenyo nke, iji tinye igwefoto selfie nke ọ ga-etu ọnụ, ga-enwe oghere gbapuru, ebe, maka usoro foto azụ, ọ ga-ewepụta iko na-agagharị agagharị nke nwere ntọala igwefoto anọ.
Igwefoto ndị dị n’azụ gụnyere ihe mmetụta abụọ dị ukwuu, otu n’elu nke ọzọ, na obere abụọ a dọbara n’akụkụ ibe ha. Cameralọ igwefoto ahụ nwekwara ọkụ ọkụ ọkụ, sistemụ elekere laser, na obere oghere nwere grille nke ekwenyere na ọ nwere igwe okwu n'ime. Foto ndị ahụ kwadoro nke ahụ ihe OnePlus 9 Pro agaghi enwe oghere igwefoto periscope ka ihe mmetụta niile gbara gburugburu, ọ bụ ezie na nke a anyị ga-akwado ma emechaa.
Foto ndị ahụ gosikwara na OnePlus 9 Pro nwere ọdụ ụgbọ USB-C na ala ma nke a na-etinye na tray SIM na ọkà okwu na-emegharị n'akụkụ ọ bụla. Ọzọkwa, anyị nwere ike ịchọpụta na ama ama ama nwere akara a na-atụgharị n'akụkụ bọtịnụ slide Alert na bọtịnụ ike n'akụkụ aka nri.
Dabere na ụfọdụ njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke a hụworo na-enweghị ntaramahụhụ, nhazi ihuenyo na-ekpughe na OnePlus 9 Pro nwere otu panel nwere mkpebi QuadHD + nke pikselụ 3.120 x 1.440. Site na ntọala mkpanaka ahụ, ndị ọrụ ga-enwe ike ịhọrọ ma ha ga-edozi mkpebi ihuenyo ka QHD + ma ọ bụ FHD + (2340 x 1080 pikselụ) ma ọ bụ nwee ekwentị na-akpaghị aka gbanwee na mkpebi kwesịrị ekwesị iji chekwaa ndụ batrị. N'aka nke ya, ọnụego ume kacha elu ruru eru bụ 120 Hz; enwere ike gbanwee ya na nke 60 Hz, nke dịkwa maka iji ya.
N'ikpeazụ, ngalaba ahụ Banyere nke ekwentị, nke bụ nke na-etinyekarị ụfọdụ data nke njirimara bụ isi nke ngwaọrụ ahụ, na-egosi OnePlus 6T kama ịnọchite anya OnePlus 9 Pro, nke dị oke ọchịchọ ịmata ihe. Na mgbakwunye na nke a, ọ naghị eme ka anyị mara ihe nhazi ahụ, nkọwapụta nke igwefoto na nkọwa nke ihuenyo nke otu.
Eziokwu ọzọ dị omimi - dịkwa ka ihe ịtụnanya- bụ na ekwuru na ebe nchekwa RAM bụ 11 GB (nke a ga-abụ n'ihi njehie) yana ebe nchekwa dị n'ime ekwentị ahụ bụ 256 GB nke nchekwa. Na nke ikpeazu anyị na-eche na ọ gaghị agbasawanye, yabụ na ọ gaghị enwe oghere kaadi microSD; A ga-ebuputa mkpanaka ahu na nguzogide mmiri nke IP68.
Anyị nwere olile anya na ọnụahịa ahụ ga-abịarukwa Snapdragon 888, Qualcomm kasị ike mobile ikpo okwu taa. Otú ọ dị, ihe niile ekwuru, a ga-enwerịrị nkwenye site n'aka onye nrụpụta, nke ga-abịa n'oge na-adịghị anya, ebe ọ bụ na mmalite nke usoro OnePlus 9 ga-arụ n'oge ụfọdụ na Machị, maka nke a, ọ fọdụrụ obere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nke a bụ otu ihe OnePlus 9 Pro si ese na ezigbo foto: nyocha ya na ese foto ọ ga - eji na - ehichapu [+ Video]
Ọrụ m na Google: Otu esi eme ka ọnọdụ gbara ọchịchịrị